Nri Mediterranean gịnị bụ ya na uru? | Nutri Nri
oriri na-edozi ahụNri
Nkwere maka enyemaka
Egwuregwu na ahụike
Iwelata ibu ngwaahịa
Sergio Gallego | | Nkwere maka enyemaka
N'ezie, ị nụla ugboro nde, gwa ya ndị na-edozi ahụ na ndị dọkịta nke mba a nke ọtụtụ uru ọ nwere Nri Mediterranean maka ahu ike na aru. Mediterenia na-eri nri ọtụtụ narị afọ ma bụrụ ụzọ dị ezigbo mma nke nri nke obodo niile dị na mpaghara Mediterenian na-eso.
Enwere ọtụtụ mba na-eso ụdị nri a: Spain, Italy, Cyprus, Greece or Portugal. Ọzọ, aga m agwa gị ntakịrị ihe gbasara nri a nke gbasiri ike maka ahụ na nke ị na-agaghị echefu na nri gị kwa ụbọchị.
1 Njirimara nke nri Mediterranean
2 Uru nke nri Mediterranean
3 Nsogbu ugbu a nke nri Mediterranean
4 Ihe ize ndụ nke nri Mediterranean na-apụ n'anya
Njirimara nke nri Mediterranean
Enweghị nri otu Mediterranean, enwere ọtụtụ iche n'ụdị nri a n'ihi na ọtụtụ mba na-agbaso ụdị nri a. Otú ọ dị na n'agbanyeghị ụfọdụ iche na peculiarities, Mediterranean nri nwere usoro nke nkịtị atụmatụ nakwa na ha na-ekere òkè na mba niile.
Isi ihe dị na nri Mediterenian bụ mmanụ oliv.
Iri oke n'oge nri ehihie.
Alimentos bara ụba na eriri dị ka ọ dị na mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na mkpo. Na salads ha ga-anọrịrị n'oge nri niile. Ọ kacha mma iri mkpụrụ osisi atọ n’ụbọchị ma were akwụkwọ nri ugboro abụọ ma ọ bụ atọ n’izu.
Mgbe a bịara n’isi nri, nkọwapụta nke efere ha dị mfe ma na-akpachapụ anya.
N'ime ụdị nri a, enwere obere nri nke nwere protein, dị ka anụ uhie. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ ọnụnọ nke azụ ma ọ bụ ulo ozuzu okuko.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ngwaahịa dịka yabasị na galik ma jiri ha mee ihe ndabere dị na njikere nri dị iche iche.
Enwere uto pụrụ iche maka Citrus na n'ihi ụtọ acidic dị ka mmanya ma ọ bụ lemon, ha abụọ eji oge efere dị ka salads.
Nri nke nri Mediterranean na-esokarị otu iko mmanya Rioja.
Mgbe ị na-akwadebe nri na usoro nri dị iche iche, a na-ejikarị ụdị ngwaahịa ọhụụ niile eme ihe, dị ka inine, azu ma obu nkpuru osisi.
Oriri nke osikapa na onyinye n'ụdị nri a ọ na - adịkarị elu, ọkachasị ihe dị ka ugboro atọ ma ọ bụ anọ n’izu ụka.
Ọ bụ ya mere kama ikwu banyere nri Mediterranean naanị, ọ kwesịrị ime ya n'ụzọ ziri ezi karịa Ndụ Mediterenian, ebe ọ bụ na ihe karịrị otu ụzọ isi eri ya bụ ụzọ ndụ na usoro nke omenaala pụrụ iche dịka na-amụ ụra mgbe iri nri.
Uru nke nri Mediterranean
Ihe oriri Mediterranean na-enye ọtụtụ uru ahụikeKarịsịa, ọ na-enyere aka izere ọrịa obi na igbochi ihe ize ndụ nke ibute ụdị ọrịa kansa. Oddly ezu, ndị a uru e mara maka dịtụ afọ ole na ole, kpọmkwem ọ bụ Na 60s na-eso ọmụmụ ihe nke Netherlands mere.
Ọmụmụ ihe a gosipụtara oke ọdịiche dị n'etiti ọnụọgụ ọnwụ n'ihi site na ọrịa ndị metụtara obi na mba dịka US na mba ndị ọzọ dịka Gris. Ihe dị iche a ruru ka ụdị nri na ụzọ ndụ nke otu ọ bụla duru. Mgbe ọmụmụ ihe a, a ghọtara ya ọtụtụ uru na aru nwere nri dabere na nri Mediterranean.
Nsogbu ugbu a nke nri Mediterranean
Ugbu a Nri Mediterranean ọ dịghị mkpa nke afọ ole na ole gara aga ma ụdị nri ọzọ agbanweela na-erughị nkọwapụta ma na-adịchaghị mma maka ahu. Ogologo oge ọrụ na ntinye ụmụ nwanyị n'ahịa ọrụ edugawo na nhọrọ dị mma maka ụdị nri ngwa ngwa. Ugbu a, ọ bụ nnukwu nkesa na agbụ nri nke ahụ na-achịkwa ahịa ya mere enwere ngwaahịa dịgasị iche iche iji rie.
Ihe ndị a niile kpatara Nri Mediterranean agbanweela site na nri Anglo-Saxon nke bara ọgaranya abụba anụmanụ ma ọ dịkarịrị obere ahụike na uru maka ahụ karịa nri Mediterranean.
Ihe ize ndụ nke nri Mediterranean na-apụ n'anya
N'agbanyeghị iwebata na-adịbeghị anya na mba anyị ụdị nri dị ka Anglo-Saxon dabere na obere ịkọwapụta nri na ọnụnọ dị ukwuu nke ụdị abụba anụ, nke nta nke nta na-amalite mmata n'ime otutu mmadu maka nri dị mma karịa na abụba na-enye ọtụtụ uru na ahụ.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na mba anyị rụtụrụ aka na ọ dị ezigbo mkpa ịgbaso Nri dika Mediterenian iji gbochie omume ọrịa obi, enwere ike mgbe niile na mmepe kwa ụbọchị nke obere mmega ahụ ma ọ bụ mmega ahụ. Site na usoro ihe abụọ a dị mfe ma soro dị mfe, ndị ọkachamara na-emesi ya ike ibu onye ahụ ga-ezu A gaghị enwe ụdị nsogbu ọ bụla gabigara ókè.
Ọ bụ ya mere o ji dị ezigbo mkpa ịkwalite n'etiti ndị na-eto eto, uto maka nri buru oke ibu dika Mediterenian emere na nri dika nkpuru osisi na akwukwo nri, iji nyere ha aka idu ezi ndu nke oma ezigbo abụba maka ahu.
N'afọ adịbeghị anya, ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọchiri anya na Senate gosipụtara mkpa ọ dị ịkwalite ụdị nri dị ka Mediterenian dị ka o kwere mee n'ihi na-apụghị ịgụta ọnụ uru nke na-enye ahụ. Maka nke a na n'ihi itinye aka nke ndị isi Spanish na mgbasa ozi dị iche, enweghị ụdị ihe egwu maka nke a ugbu a Nri Mediterranean nwere ike pụọ na nri Spanish.
Mgbe ahụ aga m ahapụ gị vidiyo nke akọwapụtara ha ọtụtụ uru na nri Mediterenian na-etinye aka na ahụ na ahụ ike nke onye ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri Mediterranean
Unusualfọdụ ihe omuma banyere kofi
Rie nri ndị a n'abalị iji hie ụra nke ọma